५ वर्ष पुरा गरि १० दिनपछी नेपाल आउने पर्खाइमा बसेका गगन कोरियामै यसरी अस्ताए ! – Namaste Host
April 1, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ५ वर्ष पुरा गरि १० दिनपछी नेपाल आउने पर्खाइमा बसेका गगन कोरियामै यसरी अस्ताए !
भाई गगन तिमी हामि माझ नभए पनि तिमीले छाोडेर गएका ति तिम्रा सहयाेगि हातलाई संस्था ले कहिले भुल्ने छैन । उच्च सम्मान का साथ तिमी सधै हामी माज सधै सधै रह्िरहने छाै ।परिवार प्रति धैरे धारण गर्ने शक्ति प्रदान हाेस !! हार्दिक श्रदान्जली ।।दक्षिण काेरियाकाे ४ बर्ष १० महिना पुरा गरी अबकाे १० दिनपछी अप्रिल तारिखका दिन नेपाल आउने पर्खाईमा बसेका गगन रावल कोरिया’मै अ’स्ताए’का छन। हिजाे राति कारिया’काे समय अनुसार करिब २:३० बजे एक्काशि ठुलाे स्वरमा आवाज आउदा उनका रुममा भएका साथिहरु हेर्न पुग्दा ए’क्का’शि बे’हो’स भए’काे अवस्था’मा उनलाई पाइएको थियो। ह’र्ट अ’ट्या’क’का का’रण उनको यो अवस्था भएको हुन सक्ने सुर्खेत समाजका निबर्तमान अध्यक्षले फेसबुक स्टाटसमार्फत जानकारी दिएका छन्। यस्तो छ उनको स्टाटस :
यस कारण भएको रहेछ स्मिता र राहुलको पुनर्मिलन, राहुल तिमि साच्चिकै महान रहेछौ ||